Si fudud u doodayaan, a kulan istaraatijiyad waa ciyaar kasta oo lagu liitaa waxaa go'aan lagu beddeli karo tartan ka dhigaa. Kulamadan oo waxaa lagu guulaystay iyada oo xeelado halkii xoog ama xirfado farsamo. Kulan Strategy khusuusan waa noocyo caanka ah ee kulan video sidoo, oo berkedda oo noocyo fara badan oo ah kulan.
Kulan Strategy waa hab grand si ay u galaan ciyaartoyda la fikirka ah xirfadaha ciyaarta sii daraya. Kulamadan ayaa marar badan, lalana si ay sidoo kale bixiyaan qaab aad u wanaagsan oo hawlgelinta bulshada users xiriirinaya, iyo kulan istaraatijiyad waxaa lagu xaqiijiyay in ay sii ciyaartoyda mashquul oo ka leexiya xiiso. Kulamadan oo ku sameeyey ganacsiga weyn suuqa la fiican Google Play darajada. Sidaas halkan waxaan ku jira 50 ugu wanaagsan ee Android Strategy Games si aad cajiib ah oo ku saabsan adduunka adventurous.
1. Da'da ilbaxnimooyinka
Age ilbaxnimooyinka waa ciyaar istaraatijiyad android ugu fiican. Waxaa jiidis baxay darafyadiisa oo dhan ku dari on content sida offline play, Google Play adeegyada Games oo farabadan ee xaaladaha tirinta labada dagaallo Adduunka. Farsamada ayaa waxa ay la shaqaysaa waa amar arrinta aad ka hor la bilaabo wareegsan kasta ka dibna tijaabooyin kuwa is rumoobay.
2. xilkeeda 2
Logu talagalay 2, ciyaar wanaagsan ee Android istaraatijiyad waa ciyaar difaaca munaaraddii dembi iyo munaaraddii ka kooban yahay in kulanka play awood badan iyo naqshadeynta ganaax. Waxaa jira hab on-line multi-ciyaaryahan halkaas oo qof ciyaara dembi munaaraddii iyo ciyaaryahanka kale ee u ciyaara difaaca munaaraddii taas oo ah qof play kulan gaar ah aadan ka dhacay doonaa meelo kale oo dhowr ah.
3. Dayrta qoyskii-RTS
Waxa hore inaad dhawrtaan doonaa oo ku saabsan Dayrta qoyskii waa naqshadeynta ay kala. Dhamaan naqshadeynta la dhameeyo camalka rinjiyeynta Chinese dhaqanka taasoo qayb ka ah in dareenka dhab ah inuu kubada cagta ciyaaro. Waxaad "rinji" amarrada aad kooxaha jir ahaan cilada oo diirada si ay u wargeliyaan wixii aad samayn lahayd. Waa tab dhab ah oo qorshuhu yahay in aad leedahay si aad u qaad seef iyo hortagaan in dagaal dadweynaha.
Tani waa xumbo, laakiin ciyaarta istaraatijiyad qabsado oo aad u maamulaan saldhigga dagaal ah. Kooxaha, casriyaynta, madaafiic, iyo qalabkii kale ee ku xasuuqeen isticmaalka, waa in aad u dhawrto saldhigga dagaal aad ka weerar shisheeye. Heerka hoose ee ciyaarta waa lacag la'aan inuu ciyaaro laakiin waa in aad soo iibsato inta kale ee ciyaarta.
Boom Beach ugu fiican ciyaar free istaraatijiyad android. In kulankaan, waa in aad xirato ilaa doomo ciidamada iyo qabsadaan xeebaha Col. Waxaa jira hab qalliin halkaas waa inaad adkaataane blackguard iyo xoreeyaan muwaadiniinta jasiiradda ka boqornimadiisa cabsi. Waxaad kor u qaadi kartaa adiga oo saldhig u gaar ah oo ay la socdaan ciidamo aad u naftaada bixiyaan fursad la hagaajiyey ee ilaalinta iyo weerarka.
6. Kulanka qabaa'ilka
Kulankan aad kor saari doonaa ilaalinta ah si ay u ilaaliyaan weeraro ka ciyaartoy kale oo markaas ay weeraraan ciyaartoyda kale. Waa ciyaar bulshada gebi sida hab howlgalka dhacaa Suna ayaa ku dhow ka dib marka aad bilaabi ciyaaro. Waxaa la gjærceler badan oo jeer oo weli sii joogo istaraatijiyad lacag la'aan ah ciyaarta ugu caansan android.
Eufloria HD waa nooc kala duwan ee ciyaarta istaraatijiyad. Halkii ee ku saabsan dagaal ba'an oo u dhexeeya labada, title this diiradda saarayaa guuleystay astiriyoodhada in meel ka dibna isticmaalka khayraadka.
8. qaboojiyay Synapse
Qaboojiyay Synapse waa ciyaar dagaalka istiraatiiji ah si caddaalad ah xad-dhaaf ah halkaas oo waa inaad kala cadeeyo heerarka ay qorshaynayaan ciidamada iyo gawrici ee guys xun. Waxaa jira bandhigay hub aad u isticmaali karto iyo dhibco badan ciyaarta ku xeelado jebinta iyo style cad.
9. Great ciyaarta dagaal yar 1
The taxane Game Great Little War lagu jeclaa oo aadka loo qiimeeyo. Kulankan aad ciidamada u guuraan guddi ay weheliyaan iyo mar aad ka heli gudaha kala duwan, waxaad eryi karaa iyaga at.
10. Boqortooyada Rush
Kulankaan ayaa lagu yaqaanaa in ay si degdeg ah, kulan play qabsado laakiin doorashooyin xiiso leh in ciidamada iyo munaarado.
11. Boqortooyada Rush MSF
Kulankaan waa ka taxanaha ah ee Boqortooyada Rush. Waxaa sidoo kale si la mid ah sida Kingdom Rush ayaa la ciyaaray.
12. Out Waxaa
Out Waxaa jira dhexjir ah ciyaarta badbaadada iyo ciyaar sim. Waxaad ciyaaro sida ay cirmaaxe niyadiisa ka cryonics meel weyn oo immensity ee bannaan. Waxaad u adkeystaan, aad xoogga oxygen kor, oo u dhiska aad markabka halka la shisheeyaha kuwaas oo aan ku hadlin sida aad ku hadasho, laakiin aad ugu danbeyn bartaan inay la hadlaan sida ay sameeyaan wax looga qabto.
13. Belaayadii Inc
Belaayadii Inc waa ciyaar aad u xiiso iyo dhisnaa ayaa maareeyay in ay sii 4.5 rating ah ee dukaanka play Google.
14. Geedaha vs Zombies 2
Kulankaan debatably waa ugu ciyaarta istaraatijiyad aan joogtada ahayn. Tani waa sida munaarad ciyaarta qaab difaac ah oo waa in aad loo abuuro dhirta hub si ay u ilaaliyaan deyrkaaga ka kaydsada Zombie ah. By isticmaalaya isku dar ah dhirta, waxa aad heli kartaa guusha ee heer kasta. Waa lacag la'aan in la app iibsadaan.
Tibaaxda "naqshadeynta Great daruuri ma aha macnaheedu kulan weyn" ay la xidhiidho kulan sida Rymdkapsel. Marka laga ee naqshadeynta fudud, kulankan waa mid xiiso leh cadaabta.
16. Skulls ee Shogun ah
Kulankaan waa kulan ku salaysan jeedin ah istaraatijiyad la xawaaraha degdeg ah, farax iyo naqshadeynta cartoonish. Wuxuu ka kooban yahay 24 heerarka, 4 ilaahyo, 6 Guud, 4 suufiyadoodii xoolaha sixir iyo cayn kasta oo content kale inay ku raaxaystaan.
Kulankan aad dhiso markab u gaar ah, Furasho iyo shisheeyaha ka soo aadiyay aad markabka, ogaan caalamka iyo qarxiyo badan oo ah alaabtii. Naqshadeynta waa dugsiga jir ah kaas oo ku siin Retro ah soo jiidasho badan dareento in ciyaarta.
18. XCOM COL Lama yaqaan
XCOM: COL gudahood waa ciyaar istaraatijiyad Android. Waxaa soo bandhigay sawiro kuwa fog oo ka sii badan tahay celcelis ahaan mobile iyo sidoo kale xilli ciyaareedkan ciyaaryahanka dheer hal in uu leeyahay aad iska duulaankii shisheeye oo isticmaalaya farsamada istaraatijiyad style chess. Kulankaan Strategy yaab leh gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah.
19. Da'da Sparta
20. Da'da dagaalamaya Empire
Oo halkan waxaan leenahay kulan kale oo istaraatijiyad taasi muujinaya of xoog iyo Magic iyo Da'da Rayaale iyo Heroes. In Da'da dagaalamaya Empire aad doonaa dhismaha adiga kuu gaar ah dhul weyn halka shaqaalayn geesiyaal, hagaajinta ciidamada iyo farsamooyinka sahaminta si ay u cabudhinayo cadaawayaashoodii oo dhan.
21. Battle ka Nasahanyahay
Kulan istaraatijiyad Tani waa ka badan la mid ah kulanka qabaa'ilka laakiin waa bandhigayaa burisay casriga ah iyo ciidamada, grenadiers tirinta, riflemen taangiyo iyo diyaarado hubeysnayn.
22. Hills ee Glory 3D
Hill sharafta ciyaarta 3D la dhigay inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida. Kulankaan ayaa kuu mas'uul ka ah kooxda difaacaneysa Jeelal istaraatiiji ah ka hirarka joogto cadaawayaashooda. Waxaad isticmaali kartaa hub kala duwan, ka qoryaha, madaafiic iyo flamethrowers, in weerar cirka ah.
23. Star Wars: Taliyaha
Naftaada Engross galay Cosmos Star Wars la dagaalladii xiddiga Disney ee: Taliyaha, kaas oo kuu ogolaanaya in aad ka ciyaari kara fallaago ah, ama sida Xukunka. Waa in aad si caqli ah u dhiso iyo xoojiyo Gun, ciidamada tababare, ku dhiirigeli, iyo u diyaar garoobaan inay weerarto saldhigyada cadow. Qalabaysan ayaa doonaysa inay ururro ciyaartoyda ka soo adduunka oo wuxuu geliyey reyreyn ka sii ciyaarta istaraatijiyad dagaal this.
24. Stormfall: Kor of Blaur
Kulankaan istaraatijiyad free bixisaa "si buuxda u ciyaaray" waayo-aragnimo istaraatijiyad MMO. The soo jeeda ee ciyaarta ayaa lagu wadaa in dal ee sixir hore. Ciyaarta ayaa kuu ogolaanaysaa inaad shaqaaleeyaan ciidammadii reer paladins, Barbariyiinta, dawacooyinka, iyo xujaajta inay ku guulaystaan ​​dhulalka iyo tirtiri soo baxay Col.
25. X-War: Kulanka of Zombies
Kulankaan istaraatijiyad lacag la'aan ah waxa ay la mid kulanka qabaa'ilka. Haddii aad taageerayaasha Kulanka beelaha markaas aan idin soo Kulanka kale kulanka xiiso leh ee Zombies in ay jiraan Zombies, laser, aalado iyo Superman ee casriga ah.
Kulankaan istaraatijiyad free yahay oo dhan ku saabsan dagaallo kuwaas oo aad u leeyihiin in ay ku hareeraynaysaan si aad cadaawayaashaada. Waxaad si loo ballaariyo dhulka boqortooyadaada. Waxaa intaa dheer, kulankaan waa dhan oo ku saabsan shakhsiyadda.
Kulanka 27. Castle
Tani waa mid ka mid ah xeeladaha lacag la'aan ah ciyaarta ugu qabsado abid oo aad u leeyihiin in ay ku ilaaliyaan saldhigyadii iyo dhisto boqortooyadiisa oo u gaar ah.
28. Carshiga Rush
Carshiga Rush waa dhan oo ku saabsan dhismaha carshiyo iyo ballaarinta aad territory. Kulankaan istaraatijiyad free Koobay adventures maqan. Sidaas oo keliya ha ku dhumin waqti iyo si deg deg ah ay leeyihiin kulankan oo aad telefoonada gacanta si fudud u lagala soo baxo link download.
29. Marka hore Strike
Tani waa maskaxda ku soo fool iyo si degdeg ah socod ciyaarta istaraatijiyad lacag la'aan ah. Kulan istaraatijiyad Tani waa mid ka mid ah releases ugu wanaagsan sanadka. Waxaa oo dhan ku saabsan dagaallo nuclear.
30. Kulanka sayidyada 2
Kulankaan istaraatijiyad free waa dhabta ah markii amarka xirfad geesiga ee dagaalka. Waxaa oo dhan oo ku saabsan waallida calooshiis. Waxaad ka ciyaari kara hab kuu gaar ah.
31. adduunka ee Arms
Tani waa dagaal ciyaarta istaraatijiyad istuuray free la sawiro aad u fiican oo animations cabsi badan. Kulankaan waa dhan oo ku saabsan ururinta hantida iyo gaadhitaanka hawlo badan si ay u helaan gunno dhibcood. Waxaad uun tahay hal talaabo meel ka baxsan tan kulan xiiso leh oo lacag la'aan ah.
32. Empire: Rome sii kordhaysa
Waa mid ka mid ah xeeladaha lacag la'aan ah ciyaar fiican. Empire: Rome sii kordhaysa waa dhan oo ku saabsan korinta ciidan aad cadaawayaashiinna laga adkaado. Kulankan oo aad u leeyihiin in ay ka shaqeeyaan sida koox, si aad cadaawayaashiinna ka adkaan.
33. idinkala bakhayli ka Nasahanyahay, War Strategy
Kulan Qorshahani waxa uu xor u yahay inuu ciyaaro. Si fudud inaad sameyso waa in biiro boqortooyo la saaxiibada iyo dagaalka u raacaan ah. Waxaad si ay u caddeeyaan ammaanta aad dhulka ee helaya dhibco sare.
Racing 34. Jiid
Taageerayaasha tartanka baabuurta, halkan waxaan idin keeni ciyaarta istaraatijiyad lacag la'aan ah ugu farxada badan sanad buuxa ee adventures iyo tartanka oo ka eryi doonaa in aad waalan.
35. Top Eleven noqdo tababare Soccer
Kulankaan istaraatijiyad free aad bixisaa ciyaarta kubada cagta dhabta ah. Kulankaan cajiib ah gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah. Top Eleven noqdo tababare Soccer waa dhan oo ku saabsan dhismaha boqortooyadaada kubada cagta gaar ah. In ka badan 100 milyan oo ciyaartoyda ku raaxeeysanayaan kulankaan.
Kulankaan oo lacag la'aan ah waa ciyaar istaraatijiyad dagaal meel. Kulankan oo aad u leeyihiin in ay kula tartanto ciyaartoy badan oo beer dagaal firfircoon. Sidaas in ay diyaar u muujinaysa dhiiranaan aad.
37. Birta Desert
Tani waa ciyaar istiraatiijiyad dagaal oo firfircoon, taas oo ay tahay in aad la diriraan aad cadaawayaashaada iyo in aad qaadato raadinta khayraadka si ay u weeraraan on xeryaha saldhig cadowgaaga.
In ka badan 11 milyan oo dadka isticmaala ku raaxeeysanayaan this ciyaarta laga cabsado oo lacag la'aan ah. Kulankaan waa koobay tartamada oo caalamka oo dhan la naqshadeynta muuqaal gaar ah oo adventures jeeda ee guud ahaan jidka ciyaaryahanka.
39. bolle Wars
Bolle Wars waa naqshadeynta 3D ciyaarta istaraatijiyad gaar ah la animation wanaagsan iyo in aad lacag la'aan ah oo ah qiimaha. Waxay leedahay dhawaaqa music cajiib ah. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay 25 wuxuush qabow weydaarsado thrills dheeraad ah ciyaaryahanka. Waxaad si ay u buuxiyaan heerka si ay u helaan gunno dhibcood.
Kulan 40. Alexander- Strategy
Kulan istaraatijiyad Tani waa mid aad u fudud oo lacag la'aan ah u ciyaaro. In ka badan 600,000 oo dadka isticmaala ku diiwaan gashan yihiin kulankaan. Waxa kale oo aad noqon kartaa mid ka mid ah nasiib ku taratamaan kulankaan ka link download.
Ugu dambeyntii, ciyaar run istaraatijiyad dagaal ay timaado in Android. Total Conquest waa dhan oo ku saabsan dhismaha magaalo xoog badan Roman in aad leedahay si ay u maareeyaan wax walba oo ay adiga kuu gaar ah. Waa kulan adventurous dhamaystiran oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
42. Kulanka qawlaysatada
Kulankaan waa dhan oo ku saabsan furo 20+ madaxda iyo helidda burcad kuu gaar ah. Waxaad barbareeyo ilaa siyaabo aad u burcad She'ool. Waxaa oo dhan ku saabsan ee brats kharribay. Waa hagaag aad gebi ahaanba ku dhex dhici doonaan jacayl la bilaash ah ciyaarta kharashka.
Tani waa ciyaar dagaal ah istaraatijiyad kontaroolka mid aad u fudud. Kulankaan ayaa wuxuu ku saabsan yahay diyaaradaha iyo saabsan muteystay dhibcaha sare si ay u sameeyaan diyaarado ayaa in ka badan burbur.
War 44. xayawaan qiroweyn
In ay taasi ciyaarta istaraatijiyad xiiso aad leedahay dhiso miinooyinka iyo seeraha. Waxaad u leeyihiin in ay ka adkaan dagaalka si ay awood u leeyihiin. Waxaad u baahan tahay oo keliya in ay buuxiyaan gool maalin abaal helo.
45. Candy Saga burburi
Kulan istaraatijiyad Tani waa kulan fiican aannu ku noo liiska. Naqshadeynta ay ka tagi doono ciyaaryahankii ugu gaajaysan, waayo, doonidiina ee sii. Jawiga ciyaarta waa mid aad u macaan. Sidaas talaabo kaliya dalkii reer naca lacag la'aan ah ayadoo laga soo degsado link la siiyay kulankaan.
46. ​​Simcity BuildIt
Just yimaadaan oo dhisiddii magaaladii aad fiican la tiro aan la koobi karayn dhismayaasha. Kulan istaraatijiyad Tani waxay bixisaa naqshadeynta 3D tayo sare leh oo aad taas oo ka dhigaysa ciyaarta ciyaarta ugu macquul ah ee taleefannada gacanta aad taas.
47. Football Manager Xararad 2015
Kulan istaraatijiyad Tani waa sii daayo ugu dambeeyey ee 2015. Waxaa uu ku guuleystay abaalmarino badan oo u kulamada iibinta ugu fiican sannadka ee ka dhigaa. Its qiimaha waa $ 9. Sidaas taageerayaasha kubada cagta waxa aad sugeyso? Just talaabo adduunka dhabta ah ee kubada cagta galay iyo soo gaarto aad xirfadaha ciyaaraha kubada cagta.
48. Shimbiraha careysan
Shimbiraha careysan yahay oo dhan ku saabsan wada baabbi'innay doofaarka hunguri by awoodaha gaarka ah ee Shimbiraha careysan. Dulqaadasho ee Shimbiraha careysan ayaa halis u yahay. Waxaad kaliya in ay saxan baxay rogaal celin ah ku doofaarro ah sababtoo ah waxay ka xaday beedka Shimbiribii careysan.
49. Star Ganastada 4X Empire Elite
In ciyaarta istiraatiijiyadan ayaa aad u leedahay in aad meel ka weerarada shisheeye ilaaliyo. Waa in aad xoog u aad dhagar siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Kulan istaraatijiyad waxa uu sheekada ku korodhsadaan oo waxaa hadhay shan marxaladaha horumar. Waxaad inay la diriraan masduulaagii aad saaxiibkaa. Tani waa dhan oo ku saabsan gaadho dhibcaha sare.
> Resource > Emulator > 50 Best Android Strategy Games